Kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo si adag ugu dagaalamaya saxiixa xidig ka tirsan Ajax – Gool FM
(England) 07 Maajo 2019. Kooxaha reer England ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa waxay si adag ugu dagaalamayaan saxiixa xidig ka tirsan safka kooxda Ajax Amsterdam inta lagu jiro xilliga suuqa xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England, Arsenal ayaa dooneysa inay ka dhigato badalka Aaron Ramsey xidiga kooxda Ajax ee Donny van de Beek.
Donny van de Beek ayaa sidoo kale xiiso balaaran ka helaya kooxda reer London ee Tottenham Hotspur, waxayna madaxda Spurs-ka rajeynayaan inay kala heshiiyaan dhigooda Ajax faahfaahinta qandaraaskiisa, inta lagu gudi jiro kulanka habeen dambe ka dhici doono Netherland.
Xidigan oo 22 jir ah, ayaa lagu tiriyaa inuu yahay bar-tilmaameedka koowaad ee kooxda Tottenham Hotspur marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda, maadaama la filayo inuu ka tago xiddiga reer Denmark ee Christian Eriksen.
Si kastaba Donny van de Beek ayaa dhaliyay 16 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 12 gool kale, 54 kulan uu ku ciyaaray maaliyada kooxda Ajax Amsterdam xili ciyaareedkan.
"Xanuun baan dareemayaa waxaana suuro gal ah in....".- N'Golo Kante